Celebrity couple image (အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်များ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Celebrity » Celebrity couple image (အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်များ)	33
Celebrity couple image (အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်များ)
Posted by နွယ်ပင် on Jun 23, 2012 in Celebrity, Entertainment, Photography | 33 comments
အခုတစ်လော အနုပညာရှင်ရပ်ဝန်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်လေးတွေပါ …အခုလက်ရှိ အပြင်မှာလည်းတကယ်တွဲခုတ်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်လေးတွေကို မကြည့်ရသေးတဲ့ ရွာသူားတွေအတွက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ……
RH Boy + စံရတီမိုးမြင့်
နွယ် ပင် has written 242 post in this blog.
View all posts by နွယ်ပင် →	Blog
water-melon says: တားတားတို့အတွဲလည်း မပါဘူး
အဟီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5780
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဆယ်လစ်ဘရစ်တီ အန်ခယ်လ်ဂနဲ့ဆယ်လစ်ဘရစ်တီ အန်တီနွယ်တို့ ရဲ့ အင်မေ့ခ်ျ လဲ ကြည့်ချင်သားဗျာ..
Thel Nu Aye says: တကယ့်အပြင်ကအတွဲတွေလား။
Thel Nu Aye says: မသိတဲ့သူတွေများများပါနေလို့ နာမည်လေးတွေဖေါ်ပြပေးပါလား။ စပ်စုရအောင်လို့။
နွယ်ပင် says: ပုံမှာ နာမယ်လေးတွေထိုးထားတာ မပေါ်လို့ အခုပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ အစ်မရေ ……..
နွယ်ပင် says: ဖရဲသီးရေ … ဟုတ်ပါရဲ့ ဖရဲ့တို့ စုံတွဲပုံကျန်သွားလို့ ဆောတီးနော် နောက်တစ်ခါဆို မကျန်ခဲ့အောင် ဂရုစိုက်ပြီး သေချာထည့်ပေးပါမယ့် …. :D
ပေါက်ဖော်ရေ … ဆယ်လစ်ဘရစ်တီ အန်ခယ်လ်ဂနဲ့ဆယ်လစ်ဘရစ်တီ အန်တီနွယ်တို့ ရဲ့ အင်မေ့ခ်ျကတော့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး တစ်အားလူကြိုက်များသွားမှာ ဆိုးလို့ပါ …. :P
အစ်မသဲနုအေးရေ .. အစ်မမေးမှပဲ အပြင်မှာ သူတို့တကယ်လက်ရှိတွဲနေသူပါဆိုပြီး စာထည့်ရိုက်ဖို့မေ့သွားတာကို သတိရတော့တယ် … ကျေးဇူးနော် …
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8367
ဆူး says: သူတို့တွေ အတွဲတွေ ဆိုတာ နွယ်ပင် ပုံ ပြမှပဲ သိတော့တယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကြုံရင် အင်ဒါဗျူးပေးပါ.. အောင်လ တောင်းပန်တာ အဲဒီ ကောင်မလေးလားလို့..
နွယ်ပင် says: ဆူးရေ … အင်တာဗျူးက နွယ်ပင်မလုပ်တာ ကြာလို့ ဂ ကိုလွှဲပေးလိုက်မယ်နော် ..
ဒီတစ်ခါ သူအင်တာဗျူးသွားလို့ အောင်လနဲ့ ကြုံရင် အစ်မသိချင်တာလေး မေးခဲ့ပေးပါလို့ ….
ဘဲဥ says: သွားဘီသွားဘီ အမလေးကုန်ပါဘီဗျာ တားတားရဲ့ စံရတီမိုးမြင့်လေးပါတွားဘီ အီးးးးးးးရွှတ် ဘွတ်
we R one says: မြင့်မြတ် က Gay ကြီးမဟုတ်ဘူးလား..။ မဟော်ဂနီ က ဟိုလူကြီးနဲ ညားနေတာဆို..။ ကြည့်ရတာ နှစ်ဖွန်ချက် ထင်တယ်..:D
နွယ်ပင် says: နွယ်ပင် သိရသလောက်ကတော့ မြင့်မြတ်က အရင် မဟော်ဂနီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားတုန်းက
အဲဒီကလူကြီးတို့ မောင်နှမက အပိုင်သိမ်းထားတယ်တဲ့ အခုတော့ မြင့်မြတ်က မဟော်ဂနီနဲ့
စာချုပ်သက်တမ်းက ကုန်သွားပြီဖြစ်လို့ အဲဒီမောင်နှမနှစ်ယောက် လက်ကလည်း လွတ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ် …
သားဦး၊မြေးဦး says: အားကျပါဘိသနဲ့ မမနွယ်ပင်ရေ။
ကိုယ့်မှာတာ့ မူးလို့ ရှုစရာမရှိပါ။
luu noutlay says: မြင့်မြတ် သူငယ်ချင်းလား ချစ်သူလား? သူငယ်ချင်းဆို၇င် မိတ်ဆက်စာလေးဘာလေးရေးချင်လို့ပါ
ခွင်ြ့ပုပါလားလို့ ဆူး ရေ…. ကျနော် တောင်းပန်တာ အဲကောင်မလေးကိုပါ…
မှတ်ချက်။ ။ကိုယ့်ကိုကိုယ် မရှက်တမ်းပြောခြင်း….။(ခွေးလွှတ်ပေးပါ)
manawphyulay says: ဟီး အဲဒီထဲက မြင့်မြတ်နဲ့ ထွန်းထွန်းပဲ သိတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကို သိဘူး။ အတော့်ကို ဗဟုသုတ ပြည့်စုံတယ်လို့ မှတ်ထားမိပါတယ်။ နာမည်လေးတွေနဲ့ သေချာ ပြောပြပေးပါဦး
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: နာလည်း
သူရို့ဂို အားကျသွားပီ ..
စာရေးချရာ ကဗျာချရာ အကယ်ဒမီ
Phaung Phaung says: စံရတီမိုးမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်း ဒီအာဘွိုင်ဆိုတဲ့ ကလေး(2)ယောက်အဖေကို ဘာကြောင့်လက်ခံ
ရတာလဲ။ ဘယ်လိုပဲကွာရှင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် စင်ဒီဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ကလေး(2)ယောက်နဲ့
ကျန်ခဲ့မှာသနားပါတယ်။ နင့်ကို မယူနိုင်ဘူး… နင့်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုပဲစောင့်ရှောက်ပါလို့ ပြောလိုက်ပြီးရော။
အခုတော့ …. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းပါဘူးကွယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 589
we R one says: ငွေ ငွေ ငွေ… :D
snow white says: အားပေးနေပါတယ် ဘယ်သူနဲ့ဘဲကြိုက်ကြိုက် ဘယ်သူနဲ့ဘဲ ချစ်ချစ်ပါ သူတို့သရုပ်ဆောင်တာကိုဘဲအားပေးပါတယ်အန်တီနွယ် တင်ပေးတော့လည်း သူတို့အပြင်က တကယ့်ချစ်သူတွေနဲ့သူတို့ပုံလေးတွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရလို့ အန်တီနွယ်ကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ် နောက်လည်း သိသေးတဲ့အနုပညာအတွဲတွေရဲ့ပုံရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေးပါအုံးအန်တီနွယ် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 253
pazflor says: တောက် စံရတီလေးတော့ တွားရှာဘီ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 693
mocho says: အဲဒါ စင်ဒီ့ ယောက်ျား အာဘွိုင်းလား ဘယ်တုန်းက ကွဲသွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ဖြစ် သေးတယ် မဟုတ်လား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 261
Uncle Lay says: အော်..သူတို့ သိပ်ပျော်နေကြပါလား….။
ညလေး says: တောင်မရေးချောထှာ…..စံ၇တီမိုးမြင့်လေး……စင်ဒီ.ကျားကျားနဲ.ပေါ့……
water-melon says: တိုတိုအောင်လ
kyeemite says: မဒမ်မိုက်နဲ့ ကြီးမိုက်ပုံ
မောင်ပေ says: ကိုကြီးမိုက်ကတော့ သူရို့ လင်မယားပုံတင်မယ်တဲ့…
ရွာထဲက အမ်ဂျီဆယ်လဘလီတီ စုံတွဲပုံတွေလဲ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးပါဦးဗျို့ ။
lu lay says: ဖရဲသီးတို့အတွဲကို တွေ့ခဲ့တယ် …………. ကန်တော်ကြီးထဲမှာ။။။။။။။
ahnyartamar says: သြော်…ပြန်ပြီးတော့ ငယ်ချင်လာပြီ။
ကြောင်ဝတုတ် says: ရွာထဲက ဆယ်လစ်ဗစ်တီတွေ အနာလိုဖြစ်နေကြပြီ
Shar Thet Man says: Ah Boy က လူပျိူမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့များစံရတီမိုးမြင့်ကတွဲရတာလဲမသိဘူးနော်…။ထွန်းထွန်းလည်းသနားပါတယ်….ကောင်မလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီတဲ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1721
မွန်မွန် says: အော်..အကြောင်းကြောင်းတွေ ရှိမှာပေါ့.. (ဒါတော့ နင်ပြောမှလား… :P )
တွဲချင်လို့ တွဲတာပေါ့။ သူ့ကိုသူတောင် မနှမြောတာ… :P
char too lan says: ဟာ……………… ပင်ပင်တို့ကလဲ ဘာတွေမှန်းလဲမတိဘူး စိတ်ပျက်ပါတယ်
နဲလို့ ထပ်တင်အုံး :P
pan pan says: သများအောင်လလေးပါသွားဘီ
အီးဒီးယက်ကလေးမပါသေးလို့ တော်သေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 244
eipu says: အောင်လကောင်မလေးကချောလိုက်တာ
Comments By Postကဲ...သတိ...သတိ - ဦးဦးပါလေရာဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - surmi - ကြက်အူလှည့်Floral Gift - Macro Series - ကြက်အူလှည့် - Miss Crystallineလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - surmi - မဟာရာဇာ အံစာတုံးSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - Foreign Resident - baydar maungဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - surmi - Foreign Residentစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - surmi - padonmarဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - San Hla Gyi - Foreign Residentဆြာအုပ်ကလိထားတဲ့ HDR - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်သစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - surmi - Foreign ResidentCongress - surmi - padonmarတံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ - surmi - Foreign Residentနာဂစ်၏ လက်ဆောင်မွန် - surmi - အလင်း ဆက်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - Mလုလင်ကွက်လပ်ဖြည့်စိတ်ဓါတ် - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - padonmar - padonmarပေါင်းစု - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mလုလင် - padonmarဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - Myo Thant - သခင် mobileသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiအိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities